काठमाडौँ । कोरोनाको त्रास, लकडाउन, अस्थीर राजनीतिक तरङ्ग, नारी हिंसा, समृद्ध नेपालको सपना बाढ्दै सकेको पुरानो वर्ष २०७७ । साँच्चिकै रुपमा नेपालीहरुले मात्र हैन विश्वले नै त्रासमय वातावरणमा पुरानो वर्षलाई विदा गरेका छन् भने नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेका छन् । अंग्रेजी वर्ष २०२१, चिनियाँ क्यालेन्डर अनुसारको नयाँ वर्ष अनि आम नेपालीहरुले मनाउँदै गरिरहेको नयाँ वर्ष २०७८ निरासालाई कुल्चेर उमंग छरेर मनाएको नयाँ वर्ष हो ।
यो नयाँ वर्षमा लकडाउनको समस्या ब्यहोर्न नपरोस भन्ने हरेक नेपालीको कामना छन् । महामारी कोरोना भाइरसको त्रासमय जीन्दगीबाट मुक्त हुने संकल्प लिएर नयाँ वर्ष मनाइरहेको छ ।
सारा विश्वलाई नै एकैसाथ गाँजेको यो ब्याधिबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेन। उद्योग कलकारखाना, होटल, पर्यटन, हवाइ क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, साना तथा ठूला पसलदेखि दैनिक कमाइबाट जिन्दगी गुजारिरहेकाहरू समेत एकैपटक चरम संकटमा परे। यसबाट यीमध्ये केही त करिब–करिब सडकमा बास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्‍यो। धिमा गतिको अर्थतन्त्रको बेगलाई आम अपेक्षाविपरीत कोरोना कहरले झन्डै ऋणात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदियो। केही समय मत्थर भएको कोरोना संक्रमणपछि लयमा फर्कनै लागेको आर्थिक क्षेत्रले फेरि पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यही अवस्था रहरिह्यो भने नयाँ वर्ष उमंग भन्दा पनि चिन्ता र भयमै बित्ने छ। यो चिन्ताबाट मुक्ति पाउन सबैको पहल जरुरी छ। कोरोनालाई दैनिकी मानेर यसबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। यति गर्न सकियो भने पक्कै पनि कोरोनाको असर धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। २०७८ सालको हरेक दिन यो नियतिबाट मुक्त हुन पाओस् भन्ने सबैको चाहना हो ।
२७७ साललाई सम्झदै कान्तिपुरका पत्रकार राजाराम गौतम लेख्छन् ।
१. संविधानको चीरहरण स् विधि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो । जब विधिमाथि नै धावा बोलिन्छ, लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विधि मिच्न उद्यत देखिए ।
मंसिर ३० मा पुनस् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । पार्टीभित्र र बाहिर फेरि विरोध भयो । पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर आफूलाई हटाउने तहमा ओर्लेपछि ओली केही मत्थर भए । आफूमाथि लट्केको विशेष अधिवेशनको तरबार टार्न उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । तर, लिएनन् । बरु पुस ५ गते संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । सिफारिसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अनाधिकृत ३८ नियुक्ति सार्वजनकि गरिए । न संसदीय सुनुवाइ, न त संवैधानिक परिषद्को पूर्ण सहमति । एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेरै अघि बढे ओली ।
संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा बहस र सडकमा विरोध बढ्दै गयो । अन्ततस् अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्स्थापना गरिदियो । यद्यपि ओलीलाई यो आदेशले छोएन । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर विधिको उपहास गर्दै राजनीतिलाई नितान्त दाउपेचको विषय बनाएरै अघि बढेका छन् । उनको यो मिचाहा प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक भएको छ ।
२. कठपुतली राष्ट्रपति स् २०७७ को राजनीति यति धेरै प्रदूषित हुनुमा ओलीसँंगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिका पनि कम छैन । अध्यादेशको आडमा शासन चलाउने ओली–महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपति भण्डारीले मलजल मात्रै गरिरहिन् । र, विवादमा तानिइरहिन् ।
३.न्यायमा राजनीति स् संसद् विघटनको त्रुटिलाई अदालतले सच्याएर संकटउन्मुख राजनीतिलाई पुनस् नियमित कोर्समा ल्याइदिएको थियो । तर, अदालतकै अर्को फैसलाले राजनीतिलाई अरू जटिल बनाइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको दलको नाम निरूपणसम्बन्धी एक फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि राजनीतिक संकटको अर्को चरण सुरु भयो ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा उक्त दल दर्ता भएपछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम गरेको पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले दल दर्ता खारेजीको उजुरी निर्वाचन आयोगमा हाले । तर, आयोगले कट्टेलको उजुरी खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता सदर गरेको थियो । कट्टेल आयोगको निर्णय चित्त नबुझाएर त्यसपछि अदालत पुगे । उता दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनेपछि सरकार शक्तिशाली भएको थियो । सरकार सञ्चालनको झन्डै तीन वर्ष बितेपछि अदालतले उक्त एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गरिदियो । फैसलाले पार्टीको नामको विवाद मात्रै निरूपण गरेन कि, पूर्ववत् पार्टीहरूमै फर्कन आदेश पनि गर्‍यो । मागदाबीमा नपरेको विषयमा बोल्दै फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्युँताइदियो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र २०७७ सुरु भएपछि आन्तरिक कलह बढेको हो । नेताहरुबीच कोठे वादविवाद र असन्तुष्टि त सरकार गठनसंँगै प्रारम्भ भइसकेको थियो । तर, २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कलह पार्टी बैठकहरु हुँदै मिडियामा सम्म आउन थाल्यो । समकक्षीहरुले सरकार चलाउन साथ नदिएको ओलीको दाबी थियो भने, ओलीइतर पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० र माधव नेपालहरुको ओलीले एकलौटी गरेको आरोप थियो । असन्तुष्टिहरु बढ्दै जाँदा ओली संसद् विघटनको आत्मघाती कदमसम्म पुगे । दलको नामसम्बन्धी अदालतको फैसलाको स्रोत पनि नेकपाभित्रैको कलह नै थियो ।
४.राजनीतिक प्रहसन स् दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष चल्नु, मनोमालिन्य हुनु नौलो होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैजसो दलभित्र द्वन्द्व चलेका अनेक नजिर छन् । समकक्षी नेताहरुबीचको व्यक्तित्व र ‘इगो’का कारण दलहरु विभाजित भएका नजिर पनि नभएका होइनन् । तर, २०७७ मा सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वले अन्तरसंघर्षका सबै सीमा नाघ्यो ।
बितेको नयाँ वर्ष झै ०७८ साल हामी सबैका लागि कहाली लाग्दो वर्ष नबनोस् । राजनीतिक संकटबाट हामीले मुक्त मिलोस् । समृद्ध नेपालको सपना पुरा होस् । महिला हिंसा नहोस् । हामी सबै संकलप पुरा भएको देख्न पाइयोस् यही छ २०७८ सालको शुभकामना ।
Tags: happy new year, nepali new year